UACE UZOBHEKANA NEJAJI | Scrolla Izindaba
UACE UZOBHEKANA NEJAJI
UNobhala-Jikelele we-ANC uAce Magashule kulindeleke ukuthi azinikele koKlebe ebese evela enkantolo ngoLwesihlanu.
I-ANC kanye noKlebe bakuqinisekisile ukuthi kukhishwe incwadi egunyaza ukuboshwa.
Uma enza kanjalo, uMagashule uzoba yisikhulu esiphezulu kunazo zonke kwezepolitiki esilethwe phambi kwezinkantolo ngamacala obugebengu bokulawulwa kombuso aphenywa yiKhomishini kaZondo namaphoyisa.
Okhulumela i-ANC uDakota Legeote utshele abakwa-Scrolla.Africa ukuthi: “Yebo, kuyiqiniso ukuthi kunencwadi egunyaza ukuboshwa enikezwe uNobhala-Jikelele wethu. UNobhala-Jikelele uxoxisana nethimba lakhe labammeli mayelana nalolu daba,” kusho uLegeote.
Okhulumela oKlebe uKatlego Mogale naye ukuqinisekisile kwabakwa-Scrolla.Africa ukuthi, kunencwadi egunyaza ukuboshwa kukaMagashule. UMogale uthe, uMagashule kulindeleke ukuthi avele eNkantolo eNkulu yase-Bloemfontein ngoLwesihlanu mhla zi-13 kuLwezi.
Ukuboshwa kukaMagashule kuhlobene nenkontileka ye-asbestos esolwa ngokukhwabaniswa imali eyizigidi ezingama-R255 e-Free State.
UMagashule ubhekene namacala amaningi ezinsolo zokweqa umthetho okufaka phakathi izinsolo zokuthi wakhokhela abantu abathile besithathu ngemali yenkontileka, okusolakala ukuthi lokhu kwakumyalelo kaMagashule.